Isbitaalka Degmada Buulo Burde oo dib u hoolgalay – STAR FM SOMALIA
Waxaa suuragashay muddo sanado ka dib ah in dib loo furo Isbitaalka Magaalada Buulo burde Ee Gobolka Hiiraan oo shacabka u adeegi jiray, balse sanadihii ugu dambeeyay ahaa mid aanan shaqeynayn.
Dadaalo kala duwan oo ay bixiyeen dadka Magaalada Buulo burde iyo Maamulka Degmada ayaa lagu guuleystay in dib u hawlgelin lagu sameeyo Isbitaalkan.
Ciidamada Amisom ee ku sugan Buulo burde jooga ayaa qayb ka qaatay dadaalada dib loogu furay Isbitaalkaaasi, oo hada bulshada si caadi ah ugu shaqaynaya.
Guddoomiyaha Degmada Buulo burde, C/casiis Duurow Cabdi oo ka hadlaayay furitaanka Isbitaalka ayaa muujiyay baahida loo qabo Isbitaalka inuu dib u shaqo bilaabo.
Waxa uu sheegay ka hor inta aanan la furin Isbitaalka inay jireen dad badan oo u geeriyooday xaalado caafimaad daro, kadib markii la waayay meel la geeyo oo lagula tacaalo.
Bulshada reer Buulo burde ayaa hada ku faraxsan dib u howlgelinta Isbitaalka Magaaladaasi, maadaama shaqo wayn uu u qabanaayo.
Madaxweynaha Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Magaalada Buulo burde u iclaamiyay inay tahay caasimada Maamulka loo dhisaayo Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.